6 सर्वश्रेष्ठ चार-पैर भएको साहित्यिक साथीहरू वर्तमान साहित्य
सबै भन्दा राम्रो चार-पैर भएको साहित्यिक साथीहरू
तिनीहरू सबै भन्दा राम्रा साथीहरू हुन्, सबैभन्दा विश्वासी र वफादार छन्। तिनीहरू विश्व संगै हाम्रो साथ छ। तिनीहरू हाम्रो यात्रा र नाटकहरू, हाम्रो यात्रा, नाटक र आनन्दमा, सबै कुरामा। अकल्पनीय रूपमा त्यहाँ छन् जो तिनीहरूलाई मन पराउँदैनन् वा उनीहरूसँग डराउँछन्। तर जो कुकुरहरु संग छैन उनीहरु लाई भावनाहरु को प्रेरणा कहिल्यै थाहा छैन।
लर्ड ब्यरनले उनीहरूलाई जनतामा प्राथमिकता दिए। ऊ सहि थियो। केवल तपाईलाई हेरेर तिनीहरूले तपाईलाई सबै चीज दिन सक्दछन्। वा तपाईंलाई सोध्नुहोस्। र तिनीहरूले पक्कै कुरा गर्न आवश्यक छैन। तिनीहरू राम्रो र नराम्रो लागि राम्रो र नराम्रो मा आफ्नो मालिकको लागि शर्त हुन्। वास्तविकता र कल्पनामा। कुकुरहरूले पृष्ठ र अनुपम साहसिक पृष्ठहरू पनि लेख्छन्। त्यसो भए, म उहाँहरूको लागि दावी गर्छु भन्ने शर्त प्यारका साथ आज म ती साहित्यिक कुकुरहरूको बारेमा लेख्छु। मेरो जीवनमा पारित गर्नेहरूका लागि पनि स्मरणशक्ति।
खैर हेरौं। म संसारमा भएका सबै म्युटहरूका पुर्खाहरूसँग शुरू गर्नेछु, ब्वाँसोहरू। र म एक कमजोरी संग समाप्त हुनेछ।
3 जम्बल र टिम
5 बुल्सेये (सटीक)
सीयोनी बथानको अल्फा नर, बाट जंगल पुस्तकरुडयार्ड किपलि by द्वारा। अकेला एक हो जसले निर्णय लिने निर्णयलाई स्वीकार गर्दछ Mggli तपाइँको एक को रूप मा। पनि सबैभन्दा विद्वान र ब्रेभ ब्वाँसो हो। र तपाइँको युद्धमा उनको मृत्युको लागि धेरै दु: खी हुनुहुन्छ Jaros कुकुरहरु.
म डराउँछु कि लाखौं पाठक र अनुयायीहरू सिंहासनको खेल मलाई जिउँदो छाला, यदि मैले यसलाई छोडिदिएँ। त्यसो भए पक्कै पनि। नाम सम्भव छैन प्रख्यात जोन स्नोको व्हाइट वुल्फ। बौद्धिक र धूर्त, भूतको त्यो अलौकिक स्पर्श छ जुन प्रसिद्ध प्रख्यात गाथामा फैलिएको छ जर्ज आर आर मार्टिन.
जम्बल र टिम
जम्बल र टिम मेरो बाल्यकालको कुकुर होहामीसँग मासु र रगतको एक थियो। यदि तपाईं ती कभरहरूमा पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ भने, तपाईं पहिले नै मेरो उमेर हुनुहुन्छ। र अधिक। तर त्यहाँ कुनै उमेर वा नयाँ संस्करणहरू परिवर्तन भयो गुइलर्मो ब्राउन oa पाँच। न त उनका अविभाज्य चार खुट्टाका साथीहरू। अथक र सँधै साहसिक कार्यको लागि, जुम्बल र टिम निश्चित कुकुरहरू हुन्। जुन हामी सबै चाहन्छौं बच्चाहरु
हामी सबै गएका थियौं आउटकास्टहरू एक पटक र हामी सबै रहस्य unraveling को वरिपरि गए जोर्गे र तिनका चचेरे भाईहरू। तर हामीलाई यो पनि थाहा थियो कि हामीसँग थियो सतर्क आँखा वा चेतावनी बार्क जम्बल र टिमको। हाम्रो शरारतले पत्ता लगाउन नपाओस्, न त कर्तव्यकर्मी दुष्टले हामीलाई ती रहस्य सुल्झाएझैं हामीलाई डाँठमा हिर्काइरहेको थियो कि भनेर तिनीहरूले हामीलाई होसियार गराउँथे।
तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न को अविस्मरणीय नायक जंगली को कल, को जैक लन्डन। साहित्यको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्यानाइन पात्रहरू मध्ये एक। तपाईको एक हो सबै भन्दा राम्रो सबै कुकुर मानहरूको उदाहरणहरू अवस्थित छन् र त्यो लन्डनलाई एक कुशल तरिकाले वर्णन गर्न जान्दछन्। कुकुरहरू मन पराउँदैन जो एक Buck पूरा गर्नु पर्छ।
अन्तको लागि, के भनियो, कमजोरी। हुन सक्छ सबैभन्दा एन्टि-हीरो, दुर्व्यवहार गरिएको र हारे। र ती मेरा मनपर्ने पात्रहरू हुन्। म अंग्रेजीमा यसको मूल नाम मन पराउँछु, धेरै सोरास। र त्यहाँ यो मालिकको साथ यो लेखको हेडर छविमा छ।
De Oliver, १ 1968 XNUMX म्यूजिकल। यो धेरै फिल्म संस्करणहरूमा एक हो ओलिवर ट्विस्टको क्लासिक डिकन्स। र अरू मध्ये यो महान ओलिभर रीडले तारांकित गर्‍यो, जो वास्तवमै सबैभन्दा विचलित गर्ने, खलबल्याउने र दुष्ट चरित्रहरूको मूर्त रूप लिन जन्मेको थियो। त्यसैले उनले कम्बल गर्यो क्रूर र निर्दयी बिल साइक्स, डिकेन्सको सबै कामको मेरो मनपर्ने।
Sikes सधैं साथ आउँछ बुल्से, एउटा बैल टेरियर दायाँ आँखामा दाग सहितको सेता। Bullseye छ उत्तम उदाहरण जुन कुकुरहरू आफ्ना मालिकहरूको जस्तो राम्रो र नराम्रो हुन सक्छन्। र ऊ Sike जत्तिकै घृणित छ, तर सबै कुकुरहरु जस्तै, पूर्ण वफादारी को उसको मालिकले उसलाई निरन्तर दुर्व्यवहार गरे पनि। यति धेरै कि अन्त मा उसले आफ्नो जीवन बचाउन को लागी मर्दछ। र दृश्य पढ्नु वा हेर्दा तपाई जहिले सोच्नुहुन्छ कि जो सबैभन्दा खराब मृत्युको योग्य छ त्यो साईक्स हो, किनकि म सँधै बुल्सेइ बचत गर्न चाहन्छु.
जे भए पनि, त्यहाँ अरु धेरै छन्, तर म यो यहाँ छोडछु। तपाईले त्यो पनि थप्नुहुन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » सबै भन्दा राम्रो चार-पैर भएको साहित्यिक साथीहरू
ती साना सुखहरू केवल लेखकहरूले सराहना गर्छन्
डिजिटल लाइब्रेरीहरू जुन हामी सित्तैमा परामर्श गर्न सक्दछौं